Home News Gudoomiyaha Gobolka hiiraan iyo masuuliyiin la socotay oo la weeraray!
Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in Wafdi uu hoggaaminaayay Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ay jidka u galeen xubno ka mid ah Al-Shabaab.
Gudoomiyaha iyo Wafdigiisa ayaa ka baxay magaalada Beledweyne waxaana ay kusii jeeddaan degmada Maxaas, halkaasi uu ka socdo dagaal u dhaxeeya Labo Maleeshiyo beeleed.
Wadada u dhaxeysa Maxaas iyo Beledweyne ayaa la sheegay in ay u galeen dagaalyahano ka tirsan Shabaab.
Ma jiro Khasaare soo gaaray Mas’uuliyiitii la socotay Gudoomiyaha , waxaana hadda ay kusii jeeddaan degmada Maxaas.
Previous articleMaxay isku afgarteen kulankii odayaasha beesha Habargidir iyo MW. Farmaajo (Akhriso qodobada)
Next articleEng Cameey”Puntland dhaqaale kama helin reerkeeyga ayaa iga bixinaayo lacagta doorashada”
Ciidan Ka Soo Gostay Somaliland oo Isu Dhiibay Puntland + Tiradoodu
Al Shabaab Oo Weerar Cusul Ku Qaaday Deegaano Hoostaga Lamu